BLG Mind weputara mmemme ahụike uche maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ihe na September 28, 2021 site BLG Uche Udi: General, ọzụzụ
Bromley, Lewisham & Greenwich Mind ewepụtala atụmatụ ahụike ọhụrụ akpọrọ Minds Up maka ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị abụọ Bromley mgbe ọnwụ ọjọọ nke ndị na -eto eto obodo abụọ nwụrụ.
Emere mmemme Minds Up site na onyinye nke ezinụlọ Oliver Stubbs na Laura Harrington, ndị bụbu ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Bromley.
Atụmatụ a, nke ebidola n'ọnwa Septemba 2021, nke ga -aga n'ihu ruo June 2022, bụ ego ezinaụlọ ha na ndị ọha welitere.
BLG Mind onye nkuzi ahụike uche Kirat Kalyan ya na ụmụ akwụkwọ nọ na Newstead Wood School.
Charlotte Fletcher, Onye isi mmepe maka BLG Mind kwuru, sị: “Site n'onyinye mmesapụ aka eburu na ncheta Laura na Oliver, anyị enweela ike ịmepụta Minds Up iji kwado ahụike uche nke ụmụ akwụkwọ na Eden Park High na ụlọ akwụkwọ Newstead Wood.
"A na -asọpụrụ anyị ma metụ anyị aka na ezinụlọ Laura na Oliver nyefere BLG Mind inye nkwado a, na n'oge siri ike maka ha, ha na -eche maka ọdịmma nke ndị ntorobịa ndị ọzọ."
Na nkwupụta njikọta, Sharon na Richard Stubbs, nne na nna Oliver Stubbs, kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ n'ezie na ndị na -eto eto nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị a ga -enweta ụdị nkwado ahụike uche dị mkpa. Ọchịchọ anyị bụ na ọrụ a ga -enyere aka igbochi ọnwụ ọ bụla na -enweghị isi. ”
BLG Mind na -edu onye nkuzi ahụike uche Charlotte Crowe, n'aka ekpe, sonyere Kirat n'inyefe ahụike ahụike na Newstead Wood School.
Ebumnuche Minds Up bụ ime ka mmata banyere nchekasị, ọdịmma na ahụike uche dị n'ime ụlọ akwụkwọ. Ndị ụlọ ọrụ BLG Mind Mental Health Training na ndị nkuzi na ndị ọrụ ozuzu aturu tinyere akụkụ nke ndị na-eto eto sitere n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla mere ka amara ọdịnaya nke mmemme a.
Ọ bụ ụgbọ oloko BLG Mind ga -ewepụta nnọkọ ahụr Kirat Kalyan, onye nwere ahụmịhe dị ukwuu nke isoro ndị na -eto eto na -arụkọ ọrụ wee mepụta mmemme dabara maka mkpa dị iche iche nke ụmụ akwụkwọ na Afọ 7 ruo n'afọ 13.
Kirat kwuru, "Anyị nwere ike ịnọ naanị izu abụọ n'ọrụ a mana ọ bụụrụ m ọ joyụ zuru oke na -eme ka uto ahụ na ịhụ oge ọkụ ọkụ maka ụmụ akwụkwọ n'ofe ụlọ akwụkwọ abụọ a.
"Anyị na -amalite ugbu a."
Na mgbakwunye na inweta ọzụzụ ahụike ahụike, nwa akwụkwọ ọ bụla ga -enweta nkọwa nke otu ha nwere ike ịkpọtụrụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka, yana ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ha nwere ike ịkwado ha.
Ụmụnne Laura ga -agba ọkara maratọn na ncheta ya
Ụmụnne Laura Harrington Fiona na Geoff so na Royal Parks Half Marathon na 10 Ọktoba iji cheta nwanne ha nwanyị na ị nweta ego ọzọ maka mmemme Minds Up. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ha, biko gaa leta ha Ibe akwụkwọ ego Virgin.
Ndị nkuzi ahụike ahụike uche anyị na -enyere òtù dị iche iche aka ịmepụta gburugburu ebe ndị mmadụ na -enwe ahụ iru ala na ihe ọmụma gbasara okwu gbasara ahụike. Anyị nwere usoro ọmụmụ dị njikere ị ga-aga ma nwee ike ịmepụta ngwugwu mkpọchi. Biko lee nke anyị Ngalaba ọzụzụ ahụike ahụike ma ọ bụ email mhtraining@blgmind.org.uk maka ozi ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi na mmemme Minds Up, biko kpọtụrụ Charlotte Fletcher, Onye Isi Mmepe: email Charlotte.fletcher@BLGMind.org.uk.